Shirkii Arimaha Dalxiiska Itoobiya Oo Lasoo Gabagabeeyay Iyo Madaxwaynaha DDSI Oo Kahadlay. - Cakaara News
Shirkii Arimaha Dalxiiska Itoobiya Oo Lasoo Gabagabeeyay Iyo Madaxwaynaha DDSI Oo Kahadlay.
Addis Ababa(CN) Jimce.Jan.16.2015, Shirkii arimaha dalxiiska Itoobiya ee kabilaabmay maalintii shalay ee khamiista ahayd magaalada Addis Ababa ayaa lasoo gabagabeeyay kaasoo lagaga hadlay sii xoojinta arimaha dalxiiska dalka Itoobiya islamarkaana ay kasoo baxeen go'aamo dhiiri galinaya kor u qaadista arimaha dalxiiska wadanka Itoobiya oo haatan meel sare maraya.
Shirkan caadiga ahaa ee golaha arimaha dalxiiska Itoobiya oo ahaa kii labaad ee ay guddigu fadhiistaan ayaa waxaa hogaaminayay raysal wasaaraha DFI mudane HaileMariam Desalegn oo ka hadlay ahmiyada dalxiiska oo sheegay in sektarka dalxiisku uu kamidyahay isbadalada lagaadhay ee dhinaca xasiloonida, dimuqraadiyada iyo wada noolaashaha Itoobiya. Wuxuuna raysal wasaaruhu sheegay in kor loo qaado heerka dalxiiska ee dalka oo haatan Afrika kaalin hore kaga jira.
Hadaba warbixintii madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo kamid ah gudiga hogaamisa arimaha dalxiiska dalka ayaa waxaa kamid ahaa in laxoojiyo xanaanada iyo ilaalinta duur joogta iyo goobaha taariikhiga ah kuwaas oo ay kamid ahaayeen seerooyinka qaran ee durjoogta (National Parks and Zoologiacal Gardens) sida Baaraale oo kuyaala gobolka Liibaan gaar ahaan inta u dhaxaysa degmooyinka Mooyaale, Mubaarik iyo Hudhet. Sidoo kale in laga hagaajiyo wado si sharci daro ah u dhexmarta Baaraale. Waxaana la isla qaatay sii xoojinta xanaanada durjoogta kala duwan sida maroodiga iyo nooc yaha kaleba.
Sidoo kale waxaa goobaha taarikhiga ah ee deegaanka oo dhamaantood lasii xoojinayo ayaa waxaa kamid ahaa Xabaashii Sayidka ee Iimey Galbeed, Qasrigii Qoraxey, Gurdumi, Kali, misaajidkii ladhisay xiligii Cusmaaniyiinta, Qasrigii Xayle Selase ee Erer, Buuraha Qarijiqood iyo goobo badan oo taarikhi ah oo deegaanku leeyahay.
Shirkan labaad ee arimaha dalxiiska Itoobiya ayaa dar-dar galin doona guud ahaan qaybaha dalxiiska ee wadanka iyadoo ay gudigu isla qaateen in lasii badiyo ilaalada iyo xanaanada goobaha taariikhiga ah iyo seelooyinka duur-joogta kala duwan ee dalka . Taasoo kutusaysa heerka nabadgalyo iyo horumar ee lagaadhay maanta in laga hadlo arimaha dalxiiska oo uu madaxwaynaha Deegaanku kamidyahay guddiga hogaaminaysa arimaha dalxiiska ee dalka Itoobiya.